Ciidanka nabad-sugidda ee NISA oo gacanta ku dhigay gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ciidanka nabad-sugidda ee NISA oo gacanta ku dhigay gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa
Wararka naga soo gaarayo magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in ciidanka NISA ay habeenkii xalay gacanta ku dhigeen gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa iyo labo qof oo la socotay.
Gaarigaasi oo noociisu ahaa Caasi ayaa la sheegayaa in lagu qabtay inta u dhaxeeysa degmooyinka Caabudwaaq iyo Xananbuuro, waxaana la sheegayaa in gaarigaasi uu uljeedkiisuna ahaa in qarax lagu geysto.
Labada qof ee lala qabtay gaarigaas ay qaraxa saaran yihiin ayaa haatan la weydiinayaa su’aalo, waxaana la sheegayaa in gaarigaasi uu ka yimid dhinaca deegaanka Galhareeri oo ay haatan gacanta ku haayaan dagaalyahanada Al-shabaab.
Sidoo kale, gaarigaasi ayaa la sheegay in lasoo marsiiyay deegaanadda ay haatan gacanta ku haayaan maamulka Ahlusuna Waljameeca, waxaana la tilmaamay in Al-shabaab ay dooneysay in gaarigaasi ay ku weerarto magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud.
Si kastaba ha ahaatee, waa markii ugu horeeysay ee gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay oo lagu qabto inta u dhaxeeysa degmooyinka Caabudwaaq iyo Xananbuuro, waxayna saraakiisha sheegeen in dib ay warbixin buuxdo kasoo gudbin doonaan.